Bogga ugu weyn 10 Shirkada ugu Wanaagsan sarifka lacagaha qalaad ee Nigeria | Cusbooneysiinta 2022
Ka ganacsiga iyo maalgashiga Bitcoin, Ethereum, iyo cryptocurrencies kale ayaa ku adkaan kara tallaabada hore. Waxaa jira warar isdaba joog ah oo ku saabsan khiyaanooyinka iyo luminta lacagta dadka, gaar ahaan halkan Nigeria.
In kasta oo tani run noqon karto, oo khiyaanooyin badan la duubay oo laga yaabo inay sii socdaan, haddana marna ma noqon doonto mid aad u fudud in lagu maalgeliyo cryptocurrency gudaha Nigeria.
Maqaalkan, waxaan ku soo bandhigi doonnaa Shirkadda Is -weydaarsiga Cryptocurrency ee ugu wanaagsan Nigeria si ay isu qorto 2022.
Walaaca ugu weyn marka la iibsanayo iyo iibsashada Bitcoin ama lacagaha kale ee loo yaqaan 'crypto currency' waa badbaado iyo badbaado. Haddii aad damacsan tahay inaad wax iibsato oo aad haysato muddada dheer, aad rabto inaad had iyo jeer ka ganacsato, ama aad rabto fududaynta adeegsiga, isweydaarsiyada soo socda ayaa ah kuwa ugu fiican ee aad yeelan karto.
Liiskani wuxuu daboolayaa shirkadda ugu wanaagsan ee is -weydaarsiga cryptocurrency ee Nigeria oo loogu talagalay noocyada ganacsatada qaarkood.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu maalgashan karo Bitcoin ama cryptocurrencies kale ee Nigeria. Si aad wax badan uga ogaato kala duwanaanshaha u dhexeeya noocyada kala duwan ee is -weydaarsiga crypto, akhri inta kale ee liiska sarrifka.
Fahamka Noocyada Is -weydaarsiga Crypto ee Nigeria
Kahor intaadan dooran sarrifka ugu wanaagsan ee ganacsigaaga ama maalgashigaaga, waxaa muhiim ah in la fahmo noocyada is -weydaarsiga jira.
#1. Isdhaafsiga Dhexe
Nooca koowaad ee ugu badan ee is -weydaarsigu waa sarrifka dhexe.
Is -weydaarsiyada caanka ah ee ku jira qaybtaan waa Luno, Remitano, Kraken, BuyCoins, Paxful. Is -weydaarsiyadaani waa shirkado gaar loo leeyahay oo bixiya aalado lagu ganacsado cryptocurrencies ee Nigeria.
In kastoo, isweydaarsiyadaani ay u baahan yihiin diiwaangelin iyo aqoonsi, oo sidoo kale loo yaqaan "Ogow xeerka Macmiilkaaga."
Is -weydaarsiyada kor ku xusan waxay leeyihiin ganacsi firfircoon, mugga sare, iyo dareere. Taasi waxay tidhi, is -weydaarsiga dhexe ma waafaqsana falsafadda Bitcoin.
Waxay ku shaqeeyaan server -yadooda gaarka ah, iyagoo abuuraya vector weerar. Haddii server -yada shirkaddu waxyeello u geysteen, nidaamka oo dhan ayaa hoos u dhici kara muddo. Kaaga sii darane, xog xasaasi ah oo ku saabsan adeegsadahaaga ayaa la daabici karaa.
Is -weydaarsiga ugu weyn uguna caansan ee is -weydaarsiga ayaa ilaa hadda ah meesha ugu fudud ee loo adeegsado isticmaaleyaasha cusub, waxayna xitaa siiyaan xoogaa ammaan ah haddii ay dhacdo in nidaamkoodu xumaado.
In kasta oo tani run tahay, marka cryptocurrency laga iibsado is -weydaarsiyadaan, waxaa lagu kaydiyaa boorsadaada haynta oo kuma jirto boorsadaada oo aad furayaasha ka haysato.
Caymiska la bixiyay wuxuu khuseeyaa oo keliya haddii is -weydaarsigu uu cillad leeyahay.
Haddii kombiyuutarkaaga iyo koontada Luno, tusaale ahaan, waxyeello loo geystay, dhaqaalahaagu wuu lumi lahaa oo malaha ma lihid ikhtiyaar inaad caymis dalbato. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in laga saaro lacago badan oo lagu dhaqmo kaydinta nabdoon ee is -weydaarsiga dhexe.
Dadka akhriya maqaalkan, waxay ku dambeeyaan akhrinta: Sida Loo Sameeyo Lacag Iibsasho Iyo Iibinta Cryptocurrency Sanadka 2022 | Tilmaan Buuxo. Fiiri!
#2. Is -weydaarsi baahsan
Is -weydaarsiga baahsan wuxuu u shaqeeyaa si la mid ah Bitcoin.
Is -weydaarsiga baahsan ma laha barta dhexe ee xakamaynta. Taas beddelkeeda, u malee sida adeege, marka laga reebo in kombiyuutar kasta oo ku jira server -ka uu ku baahsan yahay adduunka oo dhan iyo kombiyuutar kasta oo ka mid ah server -kan uu shaqsi gacanta ku hayo.
Haddii mid ka mid ah kombiyuutarradan la xidho, wax saamayn ah kuma yeelanayso shabakadda guud ahaan, maadaama kombiyuutarro kale oo badani ay sii socon doonaan shabakadda.
Awood -baahintaas awgeed, is -weydaarsiga noocan ahi ma hoos geli karo xeerarka hay'ad kasta oo sharci -dejin ah, maadaama uusan jirin qof ama koox gaar ah oo maamusha nidaamka.
Dadka ka soo qaybgalaa way yimaadaan oo tagaan, markaa ma jirto koox ama koox aanay dawlad ama xeer -ilaaliye raaci karin.
Taas macnaheedu waa dadka ka ganacsada madalku qasab maaha inay caddeeyaan aqoonsigooda waxayna xor u yihiin inay u adeegsadaan madal si kasta oo ay doortaan, sharci iyo haddii kaleba.
Dadka akhriya maqaalkan, waxay ku dambeeyaan akhrinta: Sida loogu iibsado Litecoin kaarka amaahda 2022 | Tilmaan Fudud. Fiiri!
Liiska 10 Shirkadda Is -weydaarsiga Cryptocurrency ee ugu Fiican Nigeria
Halkan waxaa ah liiska 10 -ka Shirkadda Isweydaarsiga Cryptocurrency ee ugu Fiican Nigeria
#1. Luno: Guud ahaan ugu Fiican
Luno waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan isweydaarsiga cryptocurrency ee Nigeria.
Madalkani ma aha oo kaliya isweydaarsiga crypto, sidoo kale waa nidaam jeebka lagu keydiyo Bitcoin iyo Ethereum. Waxay la mid tahay Coinbase, laakiin xoogaa way ka duwan tahay.
Asal ahaan, Luno waa fiat shirkad isweydaarsiga cryptocurrency oo inta badan ka shaqeysa Nigeria, South Africa, Singapore, Malaysia, UK, iyo 35 waddan oo kale oo Yurub ah.
Luno wuxuu leeyahay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan uguna fudud is -dhexgalka adeegsadaha maaddaama fududeynta adeegsiga app -ku uu yahay kan labaad. Sidoo kale waa isweydaarsigii ugu horreeyay ee u oggolaanaya macaamiisha inay ku iibsadaan oo ku iibiyaan crypto lacag la’aan eber.
Waxay si fudud u fududeeyaan madal aad ku xiriirin karto koontadaada bangiga Luno si aad u yeelato macaamil dhaqso ah sida bixitaanka iyo dhigashada.
Si aad u bilowdo, waxaad ku iibsan kartaa Bitcoin Luno qaddar yar sida 300 Naira si aad uga qeyb gasho ganacsiga.
Luno Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka
Mid ka mid ah isweydaarsiyada Bitcoin ee aadka loogu kalsoon yahay Afrika, Aasiya Kaliya waxay taageertaa Bitcoin iyo Ethereum
Lacag dhigasho lacag la'aan ah iyo khidmadaha bixitaanka oo hooseeya
Bixinta Degdegga ah & Ka bixitaanka
Lacag yar; 0% kuwa sameeya suuqa oo kaliya 0% - 1% kuwa suuqyada qaada (waxay ku xiran tahay lacagta fiat)
Sare ilaa xad aan xad lahayn ee sarrifka. Tani waxay ku xiran tahay heerka xaqiijinta.
Interface Isticmaal Adag
Binance waa qoditaan kale oo caan ku ah cryptocurrency oo leh in ka badan 100 qadaadiic oo si firfircoon uga ganacsada platfom -ka.
Dhawaan, shirkaddan crypto waxay siisay taageeradooda weyn dadka isticmaala Nigeria.
Sanadkii 2020, Binance waxay ku qabatay Crc Masterclass -kii ugu horreeyay ee Benin, Nigeria. Dhacdooyinkan waxaa maamula khubaro maxalli ah waxayna ujeedadoodu tahay inay bartaan oo kordhiyaan wacyiga ku saabsan Bitcoin iyo Cryptocurrency kale.
Binance ayaa sidoo kale u fududeysay sidii hore dadka reer Nigeria inay ku iibsadaan, ku iibiyaan, kuna ganacsadaan crypto madalkeeda.
Hadda, waxaad hadda si toos ah ugu shubi kartaa NGN koontadaada Binance adiga oo adeegsanaya kaarka deynta ama kaarka, ka dib iskaashi lala yeesho Flutterwave.
Ka sokow u oggolaanshaha adeegsadayaashooda inay ku iibsadaan Bitcoin iyagoo wata kaarka deynta ama kaarka deynta, Binance waxay kaloo leedahay suuq-geyn (P2P), oo la mid ah Paxful ama LocalBitcoins.
Faa'iidooyinka Binance & Qasaarooyinka
Interface user weyn oo adag Waxay noqon kartaa mid aad u badan sababtoo ah tirada alaabta
Lacagta ganacsiga ugu yar
Quidax waa shirkad sarifle Afrikaan ah oo u ogalaata macaamiisha inay ku iibsadaan ama ku iibiyaan cryptocurrency lacagtooda gudaha.
Waxaa la dhaqan geliyey 2022 iyada oo hawlgallo laga fulinayo Lagos, Nigeria.
Qalabkan wax-isweydaarsiga ah wuxuu taageeraa Bitcoin, Ethereum, Ripple's XRP, Litecoin iyo Tether ee Nigeria.
Waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad si dhakhso leh u iibsato/u iibiso Bitcoin iyo waxyaabaha kale ee loo yaqaan 'cryptocurrencies' iyadoo la kaashanayo astaantooda Iibsashada/Iibinta Degdegga ah ama iyada oo loo marayo isweydaarsiga buugga dalabka.
Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka Quidax
UI weyn iyo UX Ma jiro Adeegsada Moobaylka
Ma jiro khidmad ganacsi sameeye
Remitano waa goob suuq-geyn ah oo isku-fil-ka-dhigis ah oo internetka u sahlaysa in la iibsado oo la iibiyo cryptocurrencies. Goobta ganacsiga cryptocurrency waxaa loogu talagalay inay ku taageerto iibsashada iyo iibinta cryptocurrencies labadaba lacagaha fiat iyo cryptocurrencies.
Madalku wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay la xiriiraan iibsadayaasha cryptocurrency iyo kuwa wax iibiya si ay ula macaamilaan jawi ammaan ah.
Is -weydaarsiga cryptocurrency -ka ee onlaynka ah, Remitano wuxuu leeyahay gaarsiin caalami ah wuxuuna u adeegaa macaamiisha in ka badan 30 waddan sida Malaysia, Nigeria, Vietnam, iyo kuwo kale oo badan.
In kasta oo Remitano uu gaadhay in ka badan 30 waddan, haddana waa in la ogaadaa, in tirada shuraakadu ay aad u kala duwanaan karto iyadoo ku xiran juqraafiga. Meelaha juqraafiga qaarkood, dhiggooda ayaa laga yaabaa inay ku yaraadaan dhowr, halka meelo kale ay joogaan kumanaan.
Dalalka ay taageeraan madal Remitano waa Cambodia, Ghana, India, Kenya, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Singapore, South Africa, Tanzania iyo Vietnam.
Madalku wuxuu taageeraa cryptocurrencies ugu caansan, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Ripple's XRP, iyo Tether.
Remitano waxay aqbashaa lacag -bixinnada ku -wareejinta bangiga iyo cryptocurrencies.
Remitano Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka
Isticmaal user-saaxiibtinimo Waxay aqbashaa kaliya seddex cryptocurrencies - Bitcoin, kaash Bitcoin iyo Ethereum
Ujrooyinka bixitaanka ee isbarbar dhiga
0% khidmadaha deebaajiga
Wuxuu aqbalaa lacagaha maxalliga ah
Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka Remitano
Paxful waa goob suuq oo onlayn ah oo u oggolaanaysa iibsadayaasha iyo iibiyeyaasha inay ku kulmaan internetka oo ay isweydaarsadaan Bitcoins. Sida LocalBitcoins, Paxful waxay u oggolaaneysaa habab kala duwan oo lacag -bixin iyo xulashooyin wax -iibsi oo aan laga heli karin is -weydaarsiyada dhaqameed.
Paxful waxay siisaa adeegsadayaasha awood ay ku iibsadaan Seeraar iyada oo ku dhawaad ​​qaab kasta oo lacag bixin ah oo la malayn karo. Khibrada isticmaalaha waa mid aad u dareen badan.
Paxful waxay kaloo bixisaa adeeg lacag -bixin ah oo loogu talagalay mareegaha, taasoo u sahlaysa ganacsatada inay aqbalaan habab kala duwan oo lacag -bixin ah.
Haddii aad ku iibsato Seeraar Paxful, ma bixin doontid wax khidmad ah goobta. Si kastaba ha ahaatee, iibiyeyaasha kala duwan ayaa laga yaabaa inay ku dallacaan lacag ama qiimo, iyadoo ku xiran habka lacag bixintaada, sidaan kor ku soo sheegay.
Iibiyeyaasha qallafsan waxay bixiyaan 1% guddiga ganacsiga.
Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka
24/7 Taageero Toos ah Waxay taageertaa kaliya Bitcoin
In ka badan 300 hababka Bixinta
Is-dhaafsiga ganacsiga isku-faca ah
BuyCoins waa isweydaarsiga cryptocurrency oo hore loogu yeeri jiray Bitkoin Africa, oo la bilaabay 2017 laguna beddelay BuyCoins Africa 2018.
Iyada oo ku saleysan Lagos, Nigeria, BuyCoins waxaa aasaasay Timi Ajiboye iyo soo -saareyaasha kale ee softiweerka.
BuyCoins waxay u oggolaaneysaa isticmaaleyaasheeda inay iibsadaan oo ku iibiyaan cryptocurrencies sida Bitcoin, Ethereum iyo Litecoin oo ku yaal madal, waxaad si toos ah uga iibsan kartaa BuyCoins ama adeegsadayaasha kale ee madasha.
BuyCoins waa is-weydaarsi isku-dhig ah, tan micnaheedu waa in BuyCoins ay isu keento kuwa wax iibiya iyo kuwa iibsada cryptocurrencies inta ay u dhaqmayaan sidii dhex-dhexaadin iyagoo siinaya nidaam qaan-gaar ah oo ay adeegsadayaashu si ammaan ah uga ganacsan karaan.
Waxay siisaa adeegyo jeebka aamin ah dhammaan cryptocurrencies -gaaga taageersan, taas oo macnaheedu yahay inaadan u baahnayn inaad isticmaasho boorsooyinka dibedda si aad u dhammaystirto macaamilkaaga iyo boorsooyinka BuyCoins waxay bixiyaan habab lacag -bixin oo hufan.
BuyCoins Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka
Isla-faca-u-dhigma iyada oo loo marayo NGNT Waxaa laga heli karaa Nigeria oo keliya
Taageero Macaamiil heer sare ah
App mobile gaar ah
LocalBitcoins waa suuq-faca-u-dhigga (p2p) oo u oggolaanaya iibsadayaasha iyo iibiyeyaasha inay isgaadhsiiyaan oo si toos ah u beddelaan Bitcoins.
Si ka duwan inta badan is -weydaarsiga oo gacanta ku xira iibsadayaasha iyo iibiyeyaasha, LocalBitcoins waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay si toos ah ula xiriiraan. Waxay la mid tahay Craigslist iibsashada iyo iibinta Bitcoins. Iibiyeyaasheedu waxay bixiyaan ikhtiyaarro lacag -bixin oo kala duwan oo isku -dhafka isku -dhafan wuxuu siiyaa ammaan -suge weyn iibsadaha.
Si fudud u dhig, LocalBitcoins waa meel fiican oo lagu iibsado Bitcoin marka aadan ka heli karin hababka lacag -bixinta ee aad dalbatay meel kale.
Si kastaba ha ahaatee, qiimayaasha ayaa badanaa ka sarreeya madalkan waana inaad samaysaa dadaalkaaga habboon si aad uga fogaato in lagu khiyaameeyo.
LocalBitcoins Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka
Xirfadaha shaqsiyeed uma baahna macluumaad shaqsiyeed Waa khasab in la akhriyo xeerarka oo loo raaco si habboon. Ka digtoonow khiyaanada.
Gaarka ah, dhakhso leh, oo sahlan Way adag tahay in la iibsado xaddi badan oo bitcoins ah marka la barbar dhigo is -weydaarsiyada kale
Mid ka mid ah shabakadaha xoogga saaray suuq gaar ah waa NairaEx.com. Websaydhku wuxuu diiradda saarayaa suuqa Nigeria, sidaa darteed hal -ku -dhiggeedu wuxuu ka mid yahay magaca goobta. Laga bilaabo ereyga "Naira", mareegtu waxay aqbashaa lacag beddelkeeda Bitcoin.
At NairaEx.com, waxay ku xisaabiyaan celceliska qiimaha suuqa ee goobo badan oo sarrifka ah USD ka dibna waxay ku dhuftaan sarrifka Naira / USD.
Asal ahaan, NairaEx waxay aqbashaa laba hab oo dhigaal. Tani waxay ka imaan doontaa Naira ama xisaabta bangiga Lacagta ee Perfect.
Si loo magacaabo dhowr bangi oo aqbala, waxaan leenahay Citibank Nigeria, Diamond Bank, Ecobank Nigeria, Bank Enterprise, Fidelity Bank, First Bank of Nigeria, iyo First Bank of Nigeria si aan u magacowno dhowr.
Faa'iidooyinka NairaEx & Qasaarooyinka
Waxay leedahay tiro aad u badan oo ah ikhtiyaarrada Cryptocurrency Waxaa diiradda la saaray hal dal oo kaliya - Nigeria.
Wuxuu aqbalaa wareejinta bangiga Dhibaatooyinka xaqiijinta ee adeegsadayaasha aan u dhalan Nigeria
Kraken, oo fadhigeedu yahay San Francisco, California, waxay sheegataa inay tahay isweydaarsiga ugu weyn ee Bitcoin marka la eego mugga iyo dareeraha euro -da.
Madalku wuxuu ka shaqeeyaa Mareykanka (marka laga reebo New York sababtuna tahay BitLicense), Kanada, iyo Afrika, Nigeria oo loo dhan yahay iyo sidoo kale Midowga Yurub iyo Japan.
Is-weydaarsiga laftiisu wuxuu bilaabmay 2013 wuxuuna tan iyo markaas kor u qaaday in ka badan $ 100 milyan, iyada oo xidhitaankii ugu dambeeyay la qabtay Febraayo 2019. Asal ahaan, Kraken wuxuu ku faanaa inuu leeyahay dareere sare, hoggaaminta warshadaha, iyo taageero macmiil nool oo 24-saac ah. / 24 iyo 7 maalmood usbuucii.
Howver, Kraken waxay macaamiisheeda siisaa madal ganacsi oo horumarsan oo ay ku jiraan dhibco iyo adeegsadayaal khibrad badan leh.
Tan ugu muhiimsan, is-dhexgalka Kraken wuxuu bixiyaa ikhtiyaarro badan, laakiin maahan bilowga-saaxiibtinimo, wax la tixgeliyo haddii aad ku cusub tahay crypto.
Dhanka kale, khidmadaha Kraken ayaa ka mid ah kuwa ugu hooseeya dhammaan is -weydaarsiyada waaweyn ee bitcoin. Khidmadaha aad bixiso waxay ku xiran yihiin mugga ganacsiga ee 30 -kii maalmood ee la soo dhaafay. Guud ahaan, qiimayaashu waxay ku saleysan yihiin iibsadaha soo -saaraha.
Soo -saarayaasha, oo ku dara amarrada xaddidan sarrifka, waxay bixiyaan lacag ka yar kuwa wax iibsada, oo fuliya amarada jira.
Kraken Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka
Lacag macquul ah oo ku saabsan deebaajiga/bixitaanka Websaydhku wuu gaabiyaa marmar
Wax badan oo cryptocurrencies iyo lammaane ah oo lagu ganacsado Si sax ah uma aha bilowga-saaxiibtinimo
Tallaabooyin ammaan oo aad u sarreeya, aadna ammaan u ah in la isticmaalo, xaqiijinta laba-arrimood ee gelitaanka koontada Looma dhigin kaarka deynta/deynta
Caan ku ah ganacsato khibrad leh adeegyo aad u fiican Habka xaqiijinta qunyar-socodka ah ee xisaabaadka dhexe iyo kuwa heerka sare ah
Changelly waa adeeg isweydaarsiga cryptocurrency oo dhakhso leh oo aan la garanayn oo kuu oggolaanaya inaad ka ganacsato ku dhawaad ​​cryptocurrency kasta.
Tan ugu muhiimsan, Changelly waxay kuu oggolaaneysaa inaad isla markiiba isweydaarsato cryptocurrencies iyo adigoon iska diiwaangelin wax is -weydaarsi ah ama xaqiijin aqoonsigaaga.
Sidoo kale, adeegsadayaashu si dhakhso leh oo fudud ayey uga ganacsan karaan inta u dhaxaysa cryptocurrencies oo ku saleysan baahidooda. 0.5% khidmadda macaamilka ee cryptocurrencies ma aha caro; runtii waa wax aad u jaban badeecadan oo ku habboon.
Si kastaba ha ahaatee, shirkadu waxay noqon kartaa mid xoogaa hufan oo ku saabsan hawlaheeda. Waxa ugu weyn ee la xusuusto waa inaadan u isticmaalin Changelly macaamil ganacsi fiat, maadaama qiimaha sarrifku aad u sarreeyo.
Isbeddellada Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka
Waxay bixisaa widgets iyo API Lacag aad u badan marka la beddelayo lacagaha guriyeynta ah
Lacagta sarrifka lacagaha qalaad ee 0.5% Waxay noqon kartaa mid gaabis ah
24/7 toos ah taageerada macaamiisha
Ma jiro taariikh falal amniga lid ku ah
Liiska 10 -ka shirkadood ee ugu wanaagsan ee sarrifka cryptocurrency ee aan kor ku hayno, waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay midka ay doortaan.
Waa hagaag, doorashada adigaa iska leh.
In kastoo, waxaan kugula talineynaa in shirkadda sarrifka ugu fiican ee aad doorato daqiiqad kasta ay tahay in lagu go'aamiyo nooca macaamil ganacsi ee aad rabto inaad ku fuliso meel gaar ah waqtiga.
25 Kaydka Chip -ka ugu Fiican ee La Iibsan Karo 2022 -ka
Sida Loogu Iibsado Kaararka Hadiyada Paypal 2022
Dib-u-eegista Barnaamijka WAH ee Daacadda ah 2022: Fadeexad Sharci Mise Lacag-Sameyn?
12 Siyaabood oo ku Saabsan Sida Looga Helo Kulliyadaha Buugaagta Lacag -La'aanta ah ee Kulliyadda sannadka 2021 -ka
Iyada oo la tixgalinayo qiimaha xad -dhaafka ah ee helitaanka buugaagta kulleejyada onlaynka ah, ardayda badankood waxay u kuur -galaan sidii ay u…
Forex Entourage waa shirkad soo bilaabatay 2016. Ganacsigu wuxuu diiradda saarayaa bixinta waxbarasho iyo tababar…
15 Buugaagta Is Caawinta ugu Wanaagsan | 2022 Liiska
Dhammaanteen waxaan leenahay arrimo, waa qayb ka mid ah nolosha. Kan nool oo keliya ayaa arrin yeelan kara, dadka dhintayna ma cawdaan...
8 Meelood oo aad ku iibinayso TV Broken lacag caddaan ah sannadka 2022
Maxaad ku samayn doontaa TV -gaaga daboolka leh haddii uu leeyahay shaashad dillaacday ama jaban? Waxaad sidoo kale…
Smartphone -ka ugu Fiican ee Android ee Dhallinta 2022 -ka
Sida laga soo xigtay daraasad Piper Sandler oo dhowaan la sameeyay, dhallinta Mareykanka ayaa doorbida iPhones taleefannada Android. Xogta ayaa ka timid…
Faallooyinka Wish.com ee 2021: App -ka Wish ma sharci baa mise waa khiyaano | Talooyinka Dukaameysiga Ugu Fiican
Dukaamaysiga internetka ayaa noqonaya wax caadi ah oo cusub. Oo haddii aad tahay qof jecel dukaamaysiga internetka, hubaal waad ku raaxaysan doontaa…